1XBet iibhonasi, fumana iikhowudi zokuthengisa 1xbet kwidiphozithi
Ukubheja inkampani 1xbet yahluke kakhulu ngokwemiqathango iibhonasi kunye neenkqubo zokwazisa. Nabona badlali banomdla kakhulu baya kufumana ukuzonwabisa apha.
Iofisi inika ezi bhonasi zilandelayo:
“%” kwibhalansi yeakhawunti yokudlala – imali ibalwa ngokusekelwe kwibhalansi ye-akhawunti ekuqaleni kosuku kuthathwe ukutsalwa kwemihla ngemihla. Ubhejo oluninzi lubalwa emini, iphezulu ipesenti yebhalansi.
Ithuba lokuphumelela 200 ipesenti – ukuthatha inxaxheba kufuneka ubhalise, yenza idipozithi ubuncinane 100 iiruble kwaye wenze ukubheja, inani labo alinamda. Unyuso lusebenza kwikhompyuter enye kuphela, idilesi ye-IP enye, inombolo yefowuni enye kunye nelungu losapho elinye.
Ibhola ngaphandle kweenjongo – ukuthatha inxaxheba kwintshukumo, kufuneka ungene eofisini wenze owakho ubhejo ngo1×2 kwaye ukuba ukubheja kuyadlala, uya kwamkela 24$ kwiakhawunti yakho engundoqo.
Ixesha leCyber ” Umdlalo ngaphandle koMngcipheko” – Ukuba ubheja kumsitho wezemidlalo we-cyber kwaye ulahlekile, phantsi kwemiqathango yolu khuthazo, imali iya kubuyela kwiakhawunti yakho.
Vip ukubuyisa imali – xa udlala ekhasino ufumana imali eyongezelelweyo
Ibhonasi yangoLwesihlanu – Idipozithi iakhawunti yakho ngoLwesihlanu, kwaye ngoLwesithathu wenze 5 ubheja kwaye uphakame ukuya 100 euro kwiakhawunti yakho engundoqo.
Indlela yokusebenzisa i-akhawunti yebhonasi
Indlela yokuphumelela ukubuyisela uphononongo kwidiphozithi yokuqala
Akukho bhonasi yediphozithi
1I-xbet ibonelela ngeentlobo ezininzi zamabhaso, kunye nenkqubo enkulu yokukhuthaza, kodwa eyona bhonasi ixhaphakileyo yibhonasi yediphozithi, kwidiphozithi yokuqala. Undoqo webhonasi umi ngolu hlobo lulandelayo: umdlali omtsha, emva kokugqiba ubhaliso olupheleleyo, ngayo nayiphi na indlela ngaphandle kwediphozithi yonqakrazo-kanye yobuncinci $2, uya kubona kwi-akhawunti yakhe yebhonasi isixa esilingana nedipozithi yokuqala.
Ibhonasi isebenza ngolu hlobo lulandelayo: umdlali ofakwe $100, kunye akhawunti bonus ibonisa isixa 100% yediphozithi yokuqala, kulandele omnye $100. Ukusebenzisa imali kwi-akhawunti yebhonasi kufuneka babheje kahlanu imali yokubheja kwi-ofisi kabhuki 1xbet, ukubheja okunje nge singles kunye nokuvakalisa nge odds ubuncinane 1.4 Isiganeko ngasinye sithathelwa ingqalelo. Umdlali uye kanye 31 iintsuku zokubheja de 00:00.
Iofisi inenkqubo yebhonasi ebanzi kwaye kwikhasino, kukho ezi promotions zilandelayo:
100% ibhonasi kwidiphozithi yokuqala
Ukubuyisela imali ukuya 11% – Ipesenti kunye nokuba uyifumana kangaphi imbuyekezo ixhomekeke kwinqanaba lokunyaniseka komthathi-nxaxheba. Ayinikwanga ukuba ikwi-plus phambi kwekhasino ngexesha lokuqokelela. Ngosuku lokugqibela lwengxelo, imali ye-akhawunti kufuneka ibe ngaphantsi 2 iiyuro. Kwimali ye-vip-status ibalwa kuzo zonke iibheji, kuzo zonke ezinye izikhundla – ukusuka kwisixa semali elahlekileyo. Ugcino lufakwe kwi-akhawunti ephambili kwaye alukho phantsi kokubheja.
100% kwidiphozithi yokuqala ukuya 300 iiyuro + 30 freespins – idipozithi encinci 10 iiyuro, freespins zikhutshwa slot Book of Gold: Iklasikhi. Imali efunyenwe ngoncedo lwee-freespins ayifuni ukubheja.
50 ipesenti kwidiphozithi yesibini – I-Freespins inokufumaneka kumdlalo “Ibali likaCleopatra”. ezikhutshwa emva kokubheja ngemali. Ubuncinci bediphozithi yi 15 iiyuro, ubuninzi bu 350 iiyuro.
25 ibhonasi yepesenti kwidiphozithi yakho yesithathu – freespins kumdlalo Solar Queen, idipozithi encinci ye 15 iiyuro, ubuninzi 450 iiyuro.
Ukuze ube ne-akhawunti yebhonasi, kufuneka ungene kwi-ofisi kwaye wenze idiphozithi yakho yokuqala.
Amanqaku ebhonasi angatshintshwa ngamabhaso, kwaye ungawafumana la manqaku ngezi ndlela zilandelayo:
Ukudlala imidlalo ngeebhonasi ngokuqhelekileyo kucela umdlali ukuba avule isifuba, spin ivili lethamsanqa, okanye uqikelele itikiti eloto. Ndiyabulela kwimidlalo enjalo, kunokwenzeka ukuba ufumane amabhaso afana neetafile okanye ii-smartphones.
Yiba lilungu lepesenti yokunyusa kwibhalansi ye-akhawunti – Isixa sokuwina ilingana nesimbuku senzuzo eseleyo kuzo zonke iibheji eziwinileyo kunye nesixa semali elahlekileyo yokubheja.. Umzekelo, ukuba uyabheja 10 euro ngokuphikisana 1,5 kwaye uphumelele, kuya kuba kokulungileyo kuwe. 10 * 1.5 – 10 = 5. Ukuba ulahlekile, ungafumana 10.
Yiba lilungu lomntu ophumelele ithamsanqa kunyuso losuku – yenza ubhejo ubuncinane 5 euro ngokuphikisana 1.8. Yiya kwindawo yokunyusa kwaye ufumane itikiti lakho. Ekupheleni kosuku kuya kuba nomzobo, ukuba itikiti lakho liphakathi kwabaphumeleleyo, uya kufumana inani elithile lamanqaku.
Iibhonasi eziqhelekileyo, iguqulwa ibe yimali esisiseko kwi-coefficient ye 1:1 kwaye idluliselwe kwiakhawunti engundoqo, zingachithwa kubhejo. Kwaye uhlobo lwesibini lweebhonasi okanye amanqaku angatshintshwa ngamabhaso kwaye achithe kumboniso wekhowudi yokuthengisa 1xbet. Apho ungathenga ubhejo olunye lwasimahla, imiqulu kwivili lethamsanqa kunye nokunye okuninzi.
Akunakwenzeka ukurhoxisa imali ngokuthe ngqo kwi-akhawunti yebhonasi, kufuneka zibhejwe ngokwemiqathango yombhuki, kwaye ke ziguqulwa zibe yimali yokwenene, enokusetyenziswa, ukubheja okanye ukurhoxisa.
Ezo ngongoma zazijoliswe kwivenkile yekhowudi yokuthengisa zingachithwa apho kuphela.
Ibhonasi yediphozithi yokuqala yenye yezona zinto zidumileyo hayi kuphela kwi-1xbet, kodwa nakwabanye abaninzi, Nceda uqaphele ukuba inkqubo yebhonasi, ayisiyonxalenye enyanzelekileyo kwi-bk, unokurhoxisa ukuthatha inxaxheba kwiintengiso kwikhabhinethi yakho yobuqu.
Ukuze uwine umva ibhonasi kwidiphozithi yakho yokuqala, kufuneka ubheje kubhejo olunje nge singles kunye nokuvakalisa nge odds of 1.4 kwisiganeko ngasinye, qwalasela ngokweenkcukacha:
Kuyafuneka ukuba ubheje kwimicimbi engatshatanga nge odds of 1.4. Ukubheja kwiziphumo, iitotali, Ukubala kokukhubazeka. Ukubheja kwe-Express kufuneka kwakhona kubekho amathuba okuba ubuncinane 1.4. Ukuba ukhetha ukubheja kweparlay, kufuneka ukhumbule ukuba ukuba isiganeko esinye kubhejo silahlekile, lonke ubhejo lulahlekile.
Akukho bhonasi zediphozithi ezo iibhonasi azifuni mali kwi-akhawunti yokudlala. Ngokusisiseko iibhonasi ezinjalo zinikezelwa yi-1xbet yekhasino, kuyenzeka ukuba ufumane ibhonasi xa ubheja kwi-cybersports.
Iibhonasi ekhasino ikhona phantse kuzo zonke iindawo zokubeka, eyona idumileyo okwangoku, le midlalo kwiNcwadi yeGolide, Imithetho yeCleopatra, UKumkanikazi weSolar kunye nabanye.
Kwakhona, ungafumana iibhonasi kumdlalo onjengeBingo, umdlalo wekhadi onamanani apho kufuneka ufumane inani elithile lamanqaku.